Izinwele ezimfushane zamadoda, zibukeka nezithombe ezisetha izitayela | Amadoda aSitayela
UCarlos Rivera | | Ukunakekelwa komuntu siqu, Izitayela zezinwele
Amadoda amaningi akhetha i- izinwele ezimfishane. Futhi siyakwenza, ikakhulukazi, ngoba kukhululeke kakhulu ukunakekela kunezinwele ezinde. Ngaleyo ndlela, sisebenza kakhulu kunabesifazane.
Manje kahle Ngaphakathi kwezinwele ezimfushane kunezitayela eziningi nokusikeka. Futhi ngukuthi, ngokusika ngakunye singashintsha indlela yethu yokwenza isitayela noma isitayela sezinwele. Kubo bonke abalandeli abathembekile bezinwele ezimfishane silungiselele lokhu okukhethekile lapho siqoqa khona konke izitayela nesitayela ekusikeni eyenzelwe ngokukhethekile izinwele ezimfushane neziphakathi nendawo.
2 Isilimo saseFrance
3 Ama-bangs amade amaphakathi
5 Okufishane okufushane
6 IPompadour neToupee
7 Ukuhlukana ohlangothini ngezinwele ezimfushane
8 Isitayela se-Mod
Ukushefa kuyinto yakudala engapheli isitayela. A ukugunda izinwele okulula okungaqondi iminyaka noma izitayela. Noma ngabe uyigqoka eduze kakhulu nangokulingana, noma uma uyigqoka nge-gradient encane, ukugunda izinwele kuletha isimilo esiningi futhi, ngaphezu kwakho konke, ubudoda. Ukuphela kwento okufanele uyenze ukuyigcina isesimweni esihle vakashela umgundi wezinwele noma umgundi wakho okungenani njalo emavikini amabili. Injani i- bheka okulula ukufika lapho kukhona labo abakhetha ukuzikhuhla ekhaya, kulokhu kufanele njalo shafa kolunye uhlangothi lokukhula kwezinwele. Kulokhu okuthunyelwe esivele sikushicilele ku-'Hombres con Estilo 'sikunikeza konke izinyathelo zokuthola ukushefa okuphelele.
El isitshalo saseFrance Ngenye yokusike okuthopha kakhulu laphaya. Yaziwa ngabathile izinhlangothi ezimfushane kakhulu ziqhathanisa naphezulu okude okude, okuphekwe phambili ngama-bangs. Singasho ukuthi kuyindlela yesibili ngemuva kokushefa kwalabo ababheja ngezinwele ezimfishane kakhulu. Lokho abaningi abangakwazi ukuthi ukuthi isitshalo saseFrance Kungukuziphendukela kwemvelo noma ukuphinda kukhishwe kwekhanda lakudala likaMbusi waseRoma uCesar Augustus, owaligqoka ngezinwele zakhe ezaziwayo. Iphumelele ngama-90s phakathi kokunye ngoba osaziwayo abaningi abanjengoBrian abavela ku-'Backstreetboys 'bebeyigqoka; futhi, manje, ngo-2016 ibuyile ngamandla nokuhlala. Ngendlela, lokhu kusika kusebenza kahle kuzo zombili izinwele eziqondile nezama-wavy futhi, ngaphezu kwalokho, ngaphakathi kwayo singadlala ngobude obuhlukile bama-bangs.
Ama-bangs amade amaphakathi
Ama-bangs amade wesitayela se-pop kungenzeka kube ukuvela kwe- isitshalo saseFrance. Kulokhu kusika, i ama-bangs asele isikhathi eside futhi anabantu abaningi njengezinhlangothi, esikhundleni sokujaha, asele kancane. Kusike ukwenziwa ngesikele, kushiye indawo yezinhlangothi ingalayishiwe kakhulu kunomphetho ominyene kakhulu. Isebenza futhi kahle kakhulu kuzo zombili izinwele eziqondile nezimnyama. Isitayela sezinwele saba semfashinini kakhulu ngama-90s ngamaqembu afana ne-'Blur 'futhi namuhla sibuye ngamandla ngenxa yokusebenza kwaso okunhlobonhlobo.
El iyaqhubeka Kuyinto ukugunda izinwele okwamanje, isitayela sezinwele lokho ushanela amanethiwekhi omphakathi njenge-Instagram. Ukunqunywa kwezinwele okwenziwa ngokunciphayo noma ngamasu okuphela. Ukunqunywa kuboniswa phezulu futhi okunamandla okuphezulu, kuqhathanisa ezinhlangothini ezimfushane ezinciphileyo kusuka isikhathi eside kuye kufushane, kusuka phezulu kuye phansi. Ukusikwa kungenziwa ngokwakha ukuvela okucashile kakhulu kobude bezinwele noma, kunalokho, ngokwakha ukungafani okukhulu nokuphindaphindayo. Lolu hlobo lokusika lunamathuba amaningi kangangokuba namuhla singasho ukuthi sekuyinto yegciwane.
Ukusika okungaqondakali kubonakala Amalokhi amafushane akhishwe kakhulu. Imvamisa igqokwa ngezinhlangothi kakhulu futhi kwenziwa ukugcizelelwa kuzwane lwaphezulu. Ukusikwa okuguquguqukayo kakhulu yize kufushane impela ngoba kungadlalwa ngezinwele emaphethelweni ahlukene. Isebenza kahle ngezinwele phezulu noma nge-spiky futhi, ngendlela efanayo, idlala ngemicu ngezindlela ezihlukile.
I-pompadour yayinezinsuku zayo ezinhle ngawo-50. Izitayela zezinwele ezibonakala ngezinwele ezikamiwe njenge-toupee ezidlule kule nkathi ngenxa yesimo se-'Grace 'noma u-Elvis odumile. Yize, okungaziwa yiwo wonke umuntu, ukuthi igama lalo linikezwe umhlonishwa uMadame Pompadour, ongomunye wabathandi bakaLouis XV, owayegqoka lezi zingoma eziphakanyisiwe nezithandekayo. Kulezi zinsuku ubuyile ngokuqinile ngenxa yezithonjana zesitayela ezifana noDavid Beckham noma uBruno Mars. I-pompadour yesimanje iphinde yafakwa kabusha ngezinhlangothi ezifiphele futhi ezimfushane, ngokungafani ne-bangs enamandla kakhulu..
Ukuhlukana ohlangothini ngezinwele ezimfushane
Umugqa ohlangothini u okunye okwakudala kokulungiswa kwezinwele kwamadoda okungapheli esitayeleni. Eqinisweni, isitayela sezinwele ebesilokhu sikhona kusukela eminyakeni engu-4. Ayikaze iyeke ukuthathwa. Ukuhlukaniswa ohlangothini yisinwele sasendle, isitayela esifanele amadoda amaningi. futhi lokho kungagqokwa ngezinwele zombili nezinwele ezinde. Isibuyekezo sakamuva sokusikwa yiso esimaka umugqa ngendlela ehleliwe, umphumela otholakala ngokuwudweba ngesikhathi sokusikwa ngomshini wokushefa.
It win in the sixties popularized by the urban tribe of English origin.Wanqoba eminyakeni engamashumi ayisithupha edlule okwakwenziwa isizwe sasemadolobheni esiNgisi. I- mods bakwenze lokhu kwaba semfashinini isitayela se-bangs esifushane futhi esiqondile esinamacala amade-ubude aqala ukugqama ezindaweni ezithile njengama-sideburns. Ukusikwa kungagqokwa njengoba sibona ngokunyakaza okuncane emaphethelweni noma kukame ngomphumela we-ultra-bushelelezi. Amaqembu afana ne-'Oasis 'abe ngumpetha walokhu kusikwa okuqala ukwesaba ukuba semfashinini futhi.
Ukusika kumakwe nge-asymmetry enkulu lapho i izinhlangothi eziqinile kakhulu ziqhathaniswa nemilenze emide kakhulu egqinsiwe. Singayihlukanisa njengokuhlukile kwe- iyaqhubeka, njengoba kutholakala nangendlela ye-gradient noma ehlanganisiwe. Ezikhathini zakamuva sekuyimfashini ngenxa yomculi uJustin Bieber, oyigqoke ngezinwele ezimhlophe ze-platinum ezidaywe. Namuhla, kukhona labo abamake ukuqina kwalokhu kusikwa ngemigqa eshefiwe ezinhlangothini ezifinyelelwe ngensingo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izinwele ezimfushane
Izinwele Zabantu kusho
Ngaphandle kokungabaza, izinwele ezimfushane ziyigagasi! Kulula kakhulu ukukwenza, isikhathi esincane sesitayela, futhi zibukeka zizinhle! Ukusikeka okuhle kubonisiwe.
Phendula ekugundeni izinwele kwabesilisa
UZara ubheja kuma-sequin naku-velvet wesizini elandelayo esemthethweni